YEYINTNGE(CANADA): Sunday, August 25
ထန်းကုန်း ရောက်ပါပြီ အခြေအနေကတော့ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် ဖြစ်နေပြီ ရဲအင်အား နှစ်ရာ နဲ့ လိုအပ်ရင် အရေးပေါ် သုံးဖို့ စစ်သားအင်အား တစ်ရာကျော်ကို အဆင့်သင့်လုပ်ထားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်...
ကန့်ဘလူမြို့ပေါ်မှာတော့ လမ်းဒေါင့်တိုင်းလိုလိုမှာ သေနတ်ကိုင် စစ်သားတွေ အစောင့်ချထားတယ်........ စစ်ကားတစ်စီးလည်း မြို့ထဲမှာ လှည့်နေတယ်..
အခုချိန်ထိတော့ အရာအားလုံးက တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ပါပဲ...
Okkar Shwe Win
ကန့်ဘလူမြို့နယ် ထန်းကုန် လုံခြုံးရေး စနစ် တကျ လုပ်ဆောင်ထား
နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး ဗိုလ်မူးကြီးကြည်နိုင်တိုင်းသာသနာရေးဝန်ကြီး ဦးတင်ဝင်း
တိုင်းစည်ပင်ဝန်ကြီး ဦးတင်လှိုင်မြင့်တိုင်းဥပဒေအရာရှိ ဦးမြင့်အောင်ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးခရိုင် ရဲမင်းကြီးတို့ ဦးဆောင်ပြီး၊ရဲတပ်ရင်း ၁၆ ဒုရဲမှူးကြီးတင်မိုး ပါ ရဲတပ်သားများ မှ လုံခြုံရေးအတွက် တာဝန် ထမ်းဆောင် လျှက်ရှိပါသည်။တပ်မတော် တပ်ရင်း၅ရင်း မှလည်း အသင့် အနေ အထားပြင်ဆင်ထားရှိကြောင်း ကြားသိရပါသည်။နယ်မြေငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရန် ဂဠုန်နီဆရာတော် ဦးဆောင်သည့် ရဟန်းသံဃာ အပါး ၂၀ ခန့် ညနေ ၄း၃၀ ခန့် ထန်းကုန်းသို့ ရောက်ရှိကြောင်းသိရှိရပါသည်။
(သတင်းကို ဦးဝင်းကျော်ထွေးထံမှ ရယူ)
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 8/25/20130အကြံပြုခြင်း
ပီနန်းအပိုင် ရဲစခန်းချူပ်ကြီး ယခု အော်ပရာစီအကြီးစား ၀င်ရန် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိမည့် နေရာများကို ဂိတ်ပေါက်စောင့် ရဲများနဲ့ ခင်နေရ်ျ
မေးသောအခါ Juru . Auto City အပိုင် ပလန်ကီး အိမ်ရာများ အဲဒီမှာ မြန်မာအများစု နေထိုင်သည်။ pulau peping .
နောက် အလက်(လ်)မား ဘက်တို့ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိကြောင်း ခင်နေတဲ့ ဂိတ်ပေါက်စောင့် ဆားဘား ရဲလေးက ပြောပြတာပါ
ဌာနပေါင်းစုံပါဝင်ပါတယ်။ ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ဘယ်လိုမှ မရသောကြောင့် စကားပြောချင်ယောင်ဆောင်ပြီး သေချာကြည့်လို့ ပဲ
ရခဲ့ပါတယ် ။ အခု ရဲစခန်းထဲကနေ စထွက်နေပြီ။ butterworth ဘက်ကနေ သွားနေပါပြီ ။ ဆိုင်ကယ် ၁၅ စီး လောက်ပါဝင်ပြီး
ရဲကားအစီး ၈ စီး လောက် နောက် အချုပ်ကား ၃ ကားပါ ။ ဒီည ၁၂ နာရီလောက် ဖြစ်ဖို့ များမယ်။
ကျမပြောပြသော နေရာများတွင် နေထိုင်သော မြန်မာများ အထူး ဂရုစိုက်စေချင်ပါတယ်။
မလိုလားအပ်ပဲ ညပိုင်းအပြင်မထွက်ကြပါနဲ့ ။
မလေးရှားရောက် မြန်မာများ ဘေးရန်ကင်းကြပါစေ။
ခနွဲကဘို ရဲစခန်းမှ ရဲတပ်ကြပ်လှမျိုး နှိပ်စက်မှုခံ အဘိုးအို တဦး
ကင်းဝကြိး ရဲကင်း ခေါ်သော ပန်းတနော်မြို့နယ် အတွင်း ခေါင်ဖျားသောကျေးရွာလေးတခုတွင်းသို့ရောက်လာပြီး ရွာသား အဘိုးအို တဦးကို ဘုန်းကြီးကျောင်းပေါ်တွင်ပင် ရိုက်နှက်ခဲ့သည့် ရဲတပ်ကြပ် လှမျိုးဆိုသူ အကြောင်း။ သူ့ ရဲစခန်းသည် ခနွဲကဘိုကျေးရွာတွင်ရှိပြီး သူ့စခန်းမှ အပါး ကျေးရွာများသို့ လာရောက်ပြီး လိုင်းကြေး ကင်းကြေး အခွန်အခ ကြေးများ ကောက်ခံ နေသူဖြစ်သည်။ ယခု အဘိုးအို ကို ရိုက်နှက်ခြင်းမှာ လူ့အခွင့်အရေး အဖွဲ့ တဖွဲ့ ကျေးရွာသို့ လာရောက်ပြီး အင်းလုပ်ကွက်များ ဘုံစားအင်းများ အကြောင်း မေးမြန်းခြင်းကို ကူညီပြသပေးမိသောကြောင့် ယခုလို နံရိုး သုံးချောင်း ကျိုးသည် အထိ ရိုက်နှက်ခံရခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ ယခု ရန်ကုန်တိုင်း၊ တောင်ဒဂုံမြို့နယ် ၇၁ ရပ်ကွက်တွင် ရောက်ရှိပြိး ဆေးဝါးကုသနေရသည်။ သားသမီးများမှာလည်း နွမ်းပါးသူများဖြစ်သောကြောင့် အရိုက်လည်း ခံရသေးသည်။ ရဲတပ်ဖွဲ့ က တန်ပြန် တရားစွဲဆိုရန် စီစဉ်နေသည့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အား ပြန်လည်ခုခံမှု ဆိုသည်ကိုလည်း ရင်ဆိုင်ချေပ ရန် လမ်းစရိတ် မရှိသဖြင့် နံရိုးလည်း ကျိုးရသည် ထောင်ကျမည့် ဘေးကိုလည်း စိုးကြောက်နေရသည့် မြန်မာနိုင်ငံသား ကျေးလက် နေ လူတန်းစား ဘ၀။ မကြာမှီ ဗီဒီယိုဖိုင်များ တင်ပေးပါမည်။
Belarus နိုင်ငံရောက် သနပ်ခါးလေးနဲ့ Miss Myanmar ခင်ဝင့်ဝါ......
Miss Supranational Myanmar 2013ခင်ဝင့်ဝါက “အပျိုတော်အက” “ပျူခေတ်ဝတ်စုံ”တို့ နဲ့ သြဂုတ်၂၉ရက်နေ့ မှာ ယှဉ်ပြိုင်မည်။
Miss Supranational Myanmar 2013ခင်ဝင့်ဝါကMiss Supranational 2013 pageantပြိုင်ပွဲကျင်းပရာBelarusနိုင်ငံမှာ သြဂုတ်၂၉ရက်နေ့ တင်ဆက်မယ့်Talent Show နဲ့ National Costumes Show တို့ မှာပါဝင့်ကပြရာ၌ Talent Show တွင်အပျိုတော်အကဖြင့်၎င်းNational Costume တွင် ပျူခေတ်ဝတ်စုံဖြင့်၎င်းဝတ်ဆင်ကပြတင်ဆက်ယှဉ်ပြိုင်သွား မှာဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဧည့်စာရင်း ၊ ယာယီသန်ခေါင်စာရင်းနဲ့ နေတဲ့ သူ ၁၅၀၀ တန်းဖုန်းကဒ်ကို မဲနှိုက်ခွင့် မရှိ
၁၃၂၃ ခုနှစ်၊၀ါခေါင်လပြည့်၊1961 ခုနှစ်၊သြဂုတ်လ 26 ရက်၊စနေနေ့။
1961 ခုနှစ်၊ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေ(တတိယပြင်ဆင်ချက်) အက်ဥပဒေ။ပုဒ်မ ၂၁၊ပုဒ်မခွဲ ၁ အစားထည့်သွင်းရမည့်စာစား ပုဒ်မခွဲ(၁) ဗုဒ္ဒသာသာ သာသနာတော်သည် နိုင်ငံတော် ၏ နိုင်ငံသား အများဆုံး ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာကြီးဖြစ်သည့် အားလျော်စွာ နိုင်ငံတော်ဘာသာ သာသနာ ဖြစ်စေရမည်။
2008 ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွင် ပါဝင်သည့်စာသား။
ပုဒ်မ361-နိုင်ငံတော်သည် ဗုဒ္ဓဘာသာ သာသနာနိုင်ငံတော်ကို နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံသားအများဆုံး ကိုးကွယ် ရာဖြစ်သောဂုဏ်ထူးဝိသေသနှင့်ပြည်စုံသည့် ဘာသာသာနာဖြစ်သည်ဟု နိုင်ငံတော်က အသိအမှတ်ပြု သည်။
နိုင်ငံတော်ဘာသာ အက်ဥပဒေကို အတည်ပြုပြဌာန်းခြင်း
26.8.1961 တွင်ကျင်းပသော ပြည်ထောင်စုအစိုးရ၊လွှတ်တော်နှစ်ရပ် တွဲဖက်ညီလာခံအစည်းအဝေး တွင် ထောက်ခံမဲ 324 မဲ၊ကန့်ကွက်မဲ 28 မဲဖြင့် အတည်ပြုပြဌာန်းနိုင်ခဲ့သည်။
ဗုဒ္ဓဘာသာကို နိုင်ငံတော်ဘာသာအဖြစ် ပြဌာန်းရန်ကြိုးပမ်းခဲ့သူများ
၁။ လွတ်လပ်ရေးအကြိုကာလ အင်္ဂလိမ်အစိုးရ ခေတ်ကပင် မြန်မာတိုင်းရင်းသား၊ ရဟန်းရှင်လူ အပေါင်းတို့က ဗုဒ္ဓဘာသာကို နိုင်ငံတော်ဘာသာ ပြဌာ်းရေးအတွက် နိုးဆော်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်။
၂။ 1947ခုနှစ် မေလ ဂျူဗလီဟော ဖ-ဆ-ပ-လ ပဏာမညီလာခံတွင် အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီး ဒီးဒုတ်ဦးဘချိုက လွတ်လပ်ရေးရသည့် အခါတွင် ဗုဒ္ဓဘာသာကို နီင်ငံတော်ဘာသာအဖြစ်ပြဌာန်းသင့်ကြောင်း အဆိုတင်သွင်းခဲ့သည်။
၃။ 1951ခုနှစ်၊ဒီဇင်ဘာ 26 တွင် ပြည့်သူ့လွှတ်တော်တွင် ပါလီမန်အမတ် ဒေါ်ခင်လှ (စမ်းချောင်း)က ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံကို ဗုဒ္ဓဘာသာအဖြစ် အတိအလင်းကြေညာပေးပါရန် အဆိုတင်သွင်းခဲ့သည် ။ပါလီမန်အမတ် ဗိုလ်ခင်မောင်က ထောက်ခံသည်။ သာသနာရေးဝန်ကြီးဦးဝင်းက ကန့်ကွက်သဖြင့် အတည်မပြုနိုင်ခဲ့။
၄။ 1955 ခုနှစ်တွင် သံမဏိဦးဝင်းမောင်နှင့် သခင်ဘသောင်း တို့ တည်ထောင်သော ရီပတ်ဘလစ်ကင် ပါတီ၊ 1958 ခုနှစ်တွင် ဆာအမ်အေမောင်ကြီး အပါအ၀င် နိုင်ငံရေးသမားကြီးကိုးဦးပါဝင်သော The Buddhist Democratic Party နှင့်1959 တွင် သီပေါမင်း၏ တတိယ သမီးတော် အသျှင်ထိပ်စုမြတ်ဘုရား နာယက အဖြစ် ဆောင်ရွက်သော နိုင်ငံတော်ဘာသာဖြစ်မြောက်ရေးအဖွဲ့တို့က နိင်ငံတော် ဘာသာ ပြဌာန်းနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်။
၅. 1960 တွင် နိုင်ငံတော်ဘာသာပြဌာန်းရေးဆိုင်ရာ အကြံပေးအဖွဲ့ နှင့် စုံစမ်းရေးကောမရှင်များ ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။
၆။ 1961ခုနှစ်၊သြဂုတ်လ ၁၇ ရက်တွငိ နိုင်ငံတော်ဘာသာ အက်ဥပဒေကြမ်းကို ၀န်ကြီးချု့ပ်ဦးနု က လွတ်တော်တွင် တင်သွင်းခဲ့သည်။
၇။ 1961ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ 26 ရက်တွင် လွှတ်တော်နှစ်ရပ်တွင် မဲခွဲဆုံးဖြတ်အတည်ပြုကာ သမ္မတ အိမ်တော် တွင် မွန်းလွဲ ၁နာရီအချိန် သမ္မတဦးဝင်းမောင် က အခမ်းအနားဖြင့် လက်မှတ်ရေး ထိုးပြဌာန်းခဲ့ပါသည်။
၁၉၆၁ခု ဩဂုတ်လ၂၆ရက်မှာ ကျင်းပတဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာ ဝန်ကြီးချုပ်ဦးနုနဲ့သူရဲ့ပြည်ထောင်စုပါတီက တင်သွင်းတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာကိုနိုင်ငံတော်ဘာသာအဖြစ်ကြေညာရေးအဆိုဟာ မဲအပြတ်နဲ့အနိုင်ရခဲ့ပြီး ၁၉၄၇ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ နိုင်ငံတော်ဘာသာဖြစ်ကြောင်း ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
အစိုးရရုံးတွေ၊ ကျောင်းတွေကိုလည်း ဥပုသ်နေ့နဲ့ တနင်္ဂနွေနေ့တွေမှာ ပိတ်စေပါတယ်။ ၁၉၆၂ခု မတ်လ ၂ရက်မှာ ဗိုလ်နေဝင်းအာဏာသိမ်းပြီး ၁၉၄၇ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေကို ရုတ်သိမ်းကြောင်းကြေညာ လိုက်တော့မှ ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ နိုင်ငံတော်ဘာသာအဖြစ်က ရပ်စဲသွားတာပါ။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 8/25/2013 1 အကြံပြုခြင်း
လျှို့ဝှက်သိမ်ငယ်စွာ ချို့ချို့ငဲ့ငဲ့နေထိုင်ကြရသော စိုးနိုင်များ
ကိုစိုးနိုင်၏ မိခင်အိုကြီးအတွက် အားတက်သရောထောက်ပံ့ခဲ့ကြသော
ပြည်တွင်းပြည်ပပြည်ချစ်သူများနှင့် သူငယ်ချင်းများအားလုံးကို မိသားစုကိုယ်စားအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်၊
အကျိုးရှိစွာ လိုအပ်သလိုအသုံးချနိုင်အောင် လည်းကြိုးစားပါမည်၊
ကျနော်ကိုယ်တိုင် အနီးကပ်ကြီးကြပ်၍ သူငယ်ချင်းများနှင့် တိုင်ပင်ဆောင်ရွက်ပါမည်၊ ကျန်ရစ်သူမိသားစုများကလည်း
ကျနော့်အား ကိုစိုးနိုင်ကိုယ်စား ခင်တွယ်နေကြပါသည်။ မပါဝင်ရသေးသော ဆန္ဒရှိသူ သူငယ်ချင်းများကိုလည်း ကြိုဆိုပါသည်၊
လူမသိသူမသိ စတေးခံခဲ့ရသောလျှို့ဝှက်သိမ်ငယ်စွာ ချို့ချို့ငဲ့ငဲ့နေထိုင်ကြရသော
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စားဝတ်နေရေး လူမှုရေးဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များကို
တတ်နိုင်သမျှ ဖြည့်စွမ်းနိုင်ရန် လည်းကြိုးစားကြပါမည်။
Tibeto-Burmese စကားကို ရေးတတ်သူဟူ၍ မြန်မာနိုင်ငံတွင် တစ်ဦးတည်းသာ ကျန်ရှိတော့သည့် ဦးအောင်ချို့ မှာ ပူတာအိုမြို့ သို့ရောက်ရှိလာပြီ ဖြစ်သည်။
မိမိအနေဖြင့် မြန်မာလူမျိုးများ သမိုင်းအရ Tibeto-Burmese မျိုးနွယ်မှ ဆင်းသက်လာပြီး ၄င်းတို့၏ မျိုးရင်းဖြစ်သော တိဗက်ဒေသ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ကို အပြည့်အ၀ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် အတွက် ဦးအောင်ချို့နှင့် ပူပေါင်း၍ ပူတာအို ပညာဒါနကျောင်းတွင်တိဗက်စာပေနှင့်ဘာသာစကားအတတ်ပညာရှင်များနှင့်ပူးပေါင်းကာ
တိဗက်စာပေနှင့်ဘာသာစကားအား မပျောက်ပျက်စေရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးပြန့်ပွားစေရန်၊ဒေသခံများ သင်ကြားတတ်မြောက်စေရန် ရည်ရွယ်ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။
ကန့်ဘလူမြို့နယ်၌ မိန်းကလေးတစ်ဦးအား ကာအိနြေ္ဒ ပျက်ပြားအောင် ပြုလုပ်၍ အနိုင်ကျင့် စော်ကားရန် ကြိုးစားရာမှ အစပြုပြီး လူအုပ်စုဖြင့် မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုများ ဖြစ်ပွား
နေပြည်တော်၊ ဩဂုတ်၊ ၂၅
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ကန့်ဘလူမြို့နယ်၌ ယမန်နေ့က အမျိုးသမီး တစ်ဦးအား အမျိုးသား တစ်ဦးက ကာအိနြေ္ဒပျက်ပြားအောင် ပြုလုပ်၍ အနိုင်ကျင့်စော်ကားရန် ကြိုးစားရာမှ အစပြုပြီး မကျေနပ်သူလူအုပ်စုက ဈေးဆိုင်၊ နေအိမ်နှင့် ကြက်ခြံတို့အား မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ ကြောင်း၊ တာဝန်ရှိသူများက အကြမ်းဖက်မှုများ ထပ်မံမဖြစ်ပွားစေရန်အတွက် ထိန်းသိမ်း ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပြီး အကြမ်းဖက်ဖျက်ဆီးမှုများတွင် ပါဝင်သူများအား အမှုဖွင့်အရေးယူရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်လျက် ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။
ယမန်နေ့ ညနေ ၆ နာရီခွဲခန့်တွင် ကန့်ဘလူမြို့နယ် ထန်းကုန်ကျေးရွာအုပ်စု ဇီးပင်သာ ကျေးရွာနေ အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည် ထန်းကုန်းကျေးရွာရှိ ဆံပင်ရောင်း/ဝယ်ဆိုင်မှ ပြန်လာစဉ် ထန်းကုန်း ကျေးရွာနှင့် ဇီးပင်သာ ကျေးရွာကြားအရောက် ထန်းတောကျေးရွာနေ ဆန်းမင်းဦး(ဘ) ဦးဆန်းဝင်းက လက်ဆွဲပြီး ဖက်လုံးကာ အနိုင်ကျင့်စော်ကားရန် ကြိုးစားခဲ့ကြောင်း၊ ထိုအချိန်တွင် ဇီးပင်သာကျေးရွာဖက်မှ အမျိုးသားတစ်ဦး ရောက်ရှိလာသဖြင့် ဆန်းမင်းဦးသည် ထန်းကုန်း ကျေးရွာဘက်သို့ ထွက်ပြေးသွားခဲ့သော်လည်း ဝိုင်းဝန်းဖမ်းဆီးသဖြင့် ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်း၊ ဆန်းမင်းဦးအား ထန်းကုန်းရဲစခန်းမှ တစ်ဆင့် ကန့်ဘလူမြို့မ ရဲစခန်းသို့ ပြောင်းရွှေ့ ချုပ်နှောင်း ခဲ့ပြီး မလိုလားအပ်သော ပြဿနာများ မဖြစ်ပွားစေရန်အတွက် ညပိုင်းတွင် ရွှေဘို အကျဉ်းထောင် သို့ ပို့ဆောင်ခဲ့ကြောင်း။
ည ၇ နာရီခွဲခန့်တွင် ထန်းကုန်းကျေးရွာနှင့် ဇီးပင်ကျေးရွာတို့မှ ရွာသူရွာသား ၁၅၀ ခန့်သည် ထန်းကုန်းရဲစခန်းသို့ ရောက်ရှိလာပြီး ဆန်းမင်းဦးအား ထုတ်ပေးရန် တောင်းဆိုခဲ့ကြောင်း၊ ထို့နောက် လူအုပ်စုသည် သံလမ်းဘေးရှိ ဈေးဆိုင်၊ နေအိမ်အချို့နှင့် ကြက်​ခြံတစ်ခြံတို့အား မီးရှို့ ဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်း။
မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုကြောင့် နေအိမ် ၃၉လုံး၊ ဈေးဆိုင်ခန်း ၃ ခန်း၊ ကြက်ခြံတစ်ခြံတို့ မီးလောင်ကျွမ်း ခဲ့ပြီး နေအိမ် ၃ လုံး၊ ဈေးဆိုင်ခန်း ၁၂ ခန်း၊ ဆောက်လုပ်ရေး ပစ္စည်းဆိုင် ၃ ဆိုင်တို့ ရိုက်ချိုး ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရကြောင်း သိရသည်။
အခင်းဖြစ်နေရာသို့ တိုင်းဒေသကြီး နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးနှင့် အဖွဲ့၊ တိုင်းဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးနှင့် အဖွဲ့၊ ရဲတပ်ရင်းမှ တပ်ရင်းမှူးနှင့်အဖွဲ့များ ရောက်ရှိပြီး လုံခြုံရေးဆောင်ရွက်လျက် ရှိကြောင်း၊ တိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ်နှင့်အဖွဲ့သည် ယနေ့နံနက် ၅ နာရီကျော်ခန့်တွင် ကန့်ဘလူမြို့နယ် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာနရုံးသို့ ရောက်ရှိပြီး နယ်​မြေတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးအတွက် လိုအပ် သည်များ ဖြည့်ဆည်းမှားကြားခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။ ( သတင်းစဉ်)
ဥရောပမြို့တော်ဝန်တဦးမှ ရန်ကုန်မြို့အား ညီအမမြို့တော်အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုရန်ကမ်းလှမ်း
ရန်ကုန်မြို့၏ မိုးရာသီအလှအပများအား ယခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့မှ ပိုမိုထင်ရှားလှပအောင် ကြိုးစားနိုင်ခဲ့သဖြင့် ဥရောပ နိုင်ငံတခုမှ တ၀မ်းကွဲ ညီအမမြို့တော်အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုရန် ၎င်းမြို့တော်ဝန်မှ ကမ်းလှမ်းလာခဲ့သည် ။
အဆိုပါမြို့မှာ ကမ္ဘာကျော် ဗင်းနစ်မြို့ဖြစ်ပြီး ပထမဆုံး အကူအညီအနေဖြင့် လမ်းကြိုလမ်းကြားသွား စက်တပ်သမ္မာန်ငယ်လေးများ ကူညီပေးသွားမည်ဟု သိရပြီး လက်ရှိတွင် မြို့တွင်းသို့ပြေးဆွဲနေသော ခရီးသည်လိုင်းကားများနေရာတွင် ဒလ နှင့် ဆိပ်ကြီးခနောင်တို တို့မှ သမ္မာန်ငယ်များဖြင့် သွားလာနိုင်ရန် စီစဉ်ပေးသွားမည်ဟုသိရသည် ။
ခိုင်ပြည်နယ် မောင်တောမြို့နယ်တွင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံက အကြမ်းဖက်ခံရမှုများကြောင့် ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာသည့် ရခိုင်မျိုးနွယ်စုဝင် ဒုက္ခသည်မိသားစု ၁၈ စု (လူဦးရေ ၉၀ကျော်) အတွက် အရေးပေါ် ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းများ လိုအပ်နေကြောင်း လူမှုကူညီ စောင့်ရှောက်ရေးအသင်း (တောင်ပြိုလက်ဝဲ) ၏ ပြင်ပ ဆက်သွယ်ရေး တာဝန်ခံ ဦးထွန်းထွန်းဝင်းက ပြောကြားသည်။
ရခိုင် အမျိုးသမီးတစ်ဦးကို ဘဂလီကုလား များ အုပ်စုလိုက် မုဒိန်းကျင့်ကာသတ်ဖြတ်
၂၅၊ သြဂုတ်၊ ၂၀၁၃ ၊ Coral Arakan News ( သတင်း)
ယမန်နေ့ ညနေပိုင်းက ပေါက်တောမြို့နယ် ကြိမ်နီပြင် ကုလားဒုက္ခသည်စခန်းနှင့် နီးကပ်သော မညင်းကိုင်းကျေးရွာမှ ရခိုင်တိုင်းရင်းသူတစ်ဦးကို ဘင်္ဂလီကုလားများက အုပ်စုလိုက် မဒိန်းကျင့်ကာ သတ်ဖြတ်ထားသောအလောင်းကို ညနေ ၇နာရီခန့်က ရွာသားများက တွေ့ ရှိရကြောင်းသတင်းရရှိသည်။
သေဆုံးသူမှာ အသက် ၃၈နှစ်ရှိ ကုလေး ၄ ယောက်၏မိခင် မလှသန်းစိန်ဖြစ်ပြီး သူ၏လယ်ထဲသို့သွားပြီးပြန်မလာသဖြင့် သွားရောက်ရှာဖွေရာ အလောင်းကိုတွေ့ရှိရခြင်းဖြစ်သည်။
သူ၏လယ်ထဲသို့ ကုလားများ သုံးယောက်နှစ်ယောက် ဆင်းသွားကြသည်ကို မသကာင်္သဖြင့် လယ်ထဲသို့သွားရှာကြရာတွင် အ၀တ်အစားများ စုတ်ပြတ်လျှက် ခေါင်းကိုထုရိုက် ဒဏ်ရာများဖြင့်သေဆုံးနေကြောင်းသိရသည်။
သေဆုံသူ၏ အလောင်းကို ယနေ့နံနက်တွင် ပေါက်တော ဆေးရုံသို့ယူဆောင်ပြီး ညနေ၃နာရီတွင် သဂြိုလ်မည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
၂၀၁၂နှစ် မတ်လ ၂၈ ၇က်နေ့ကလည်း ကျောက်နီမော်ကျေးရွာနေရခိုင်တိုင်းရင်းသူ မသီတာထွေးအား ဘင်္ဂလီကုလားများက အုပ်စုလိုက် မဒိန်းကျင့်ကာ သတ်ဖြတ်လိုက်သဖြင့် ဒေသခံ ရခိုင်လူမျိုးများနှင့် တင်းမာမှုများဖြစ်ပေါ်ပြီး ဘင်္ဂလီ ရခိုင် ပဋိပက္ခများဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သည်။
ကင်တားနားဘင်္ဂါလီအခွင့်အရေးအတွက်ခရီးစဉ် မအောင်မြင်ခဲ့ဟုဆို ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ပြော
ဒီအကြောင်းကို ရေးမယ် ရေးမယ်နဲ့ ရေးသင့်၊ မရေးသင့် ချိန်ဆနေတာနဲ့မရေးဖြစ်ခဲ့ဘူး။ ခုတော့ ရေးသင့်တယ် ထင်လို့ ရေးပါတော့မယ်။ မြန်မာနဲ့ မွတ်စလင်ဟာ ခုဆိုရင် အဓိကရုဏ်းတွေ မကြာခဏ ဖြစ်နေတာတွေ့ရတယ်။ဘာကြောင့် ဖြစ်တာလဲကြည့်လိုက်ရင် မုဒိမ်းမှု၊ ဘယ်သူက စလွန်ကျူးလဲ။ မွတ်စလင်ယောက်ျားလေးက မြန်မာမိန်းမလေးကို ကျူးလွန်၊ အဲကပြန်စ၊ သူချ၊ ကိုယ်ချ။ နောက်တော့ အသံထွက်တာက လူနည်းစုကို လူများစုက ၀ိုင်းဝန်းအနိုင်ကျင့်တာပါတဲ့။လူနည်းစုဟာ တကယ်တော့ လူအများစုကို ဂရုစိုက်ရမယ်။ ခုလိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ ပိုလို့တောင်ဂရုစိုက်သင့်တယ်။ မဖြစ်သင့်တာ မဖြစ်အောင်၊ကြီးသောအမှု ငယ်အောင်၊ ငယ်သောအမှု ပပျောက်အောင်ကြိုးစားသင့်ကြိုးစားရမယ်။ ထိမ်းသိမ်းသင့် ထိန်းသိမ်းရမယ်။မွတ်စလင်အမျိုးသမီးကို မြန်မာအမျိုးသားက လွန်ကျူးခဲ့ရင်တောင် ပဋိပက္ခဖြစ်စေမဲ့နည်းလမ်းနဲ့ မဖြေရှင်းသင့်ဘဲတရားဥပဒေဘောင်အတွင်းက ပြီးနိုင်အောင် ကြိုးစားရမယ်။ ဒါက သဘောတရားကို ပြောပြတာပါ။လွန်ကျူးတယ်လို့လည်း မကြားမိသေးဘူး။ မသိတာလည်းဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပေါ့။ခုတော့ လူနည်းစုက လူအများစုကို ရန်စနေသလို ဖြစ်နေတယ်။ သေသေချာချာ တွေးကြည့်ရင် လုံးဝ လုံးဝကို မဖြစ်သင့်တဲ့ ကိစ္စပဲ။ ဒီလိုမဖြစ်ရအောင် မွတ်စလင်တွေရဲ့ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေက သေချာကျန သွန်သင်ညွန်ပြထားသင့်တယ်။ ခုချိန်ဒီလိုတွေဖြစ်နေတယ်၊ အထူးဂရုစိုက်ကြဖို့နဲ့ မဖြစ်သင့်တာ မဖြစ်အောင် ၀ိုင်းဝန်းထိန်းသိမ်းကြဖို့ဆိုတဲ့ သြ၀ါဒတွေ၊ ညွန်ကြားချက်တွေ ထုတ်သင့်တယ်။( ထုတ်ထားတယ် ဆိုရင်တော့ မပြောလို)ထုတ်ပြန်ချက်တွေ၊ ညွန်ကြားချက်တွေအသိပေးရဲ့သားနဲ့ သက်သက်ကျူးလွန်နေတာဆိုရင် ကျူးလွန်တဲ့သူကို မွတ်စလင်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုယ်တိုင်ကရှာဖွေ၊ ရှုတ်ချ၊ အပြစ်ပေးနိုင်အောင် ကြိုးစားရမယ်။ ကာကွယ်ပေးဖို့ မလိုဘူး။ ကာကွယ်ပေးချင်ရင် တရားဥပဒေဘောင်အတွင်းက ကာကွယ်၊ အဓိကရုဏ်းဖြစ်စေမဲ့ ကာကွယ်နည်းမျိုးနဲ့ ကာကွယ်မပေးသင့်ဘူး။အဓိကရုဏ်းတွေဖြစ်လာရင် ကောင်းကျိုးဆိုတာထက် ဆိုးကျိုးက ပိုများပါတယ်။ ဒါကြောင့် အချိန်မှီသာ ပြင်ဆင်ခြင်းသည်သာ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အကျိုးများပါတယ်။ ခုလိုမှမဟုတ်ဘဲ ဆက်လက်၍ လွန်ကျူးနေအုံးမယ်။ ဥပဒေအပြင်က ကာကွယ်ပေးနေအုံးမယ်ဆိုရင်တော့ ဖြစ်လာမဲ့ဆိုးကျိုးတွေကဖြင့်နောင်အနာဂါတ်မျိုးဆက်တွေအတွက် ကောင်းကျိုးတခုမှ ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာတော့ သေချာပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်တောနယ်စပ်မှာ နိုင်ငံခြားသားများ တရားမဝင်ရောက်မှုတားဆီးကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ (မကဖ)
ကို ဖွဲ့စည်းထားရှိဖို့ စီစဉ်
ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်တောနယ်စပ်မှာ နိုင်ငံခြားသားများ မတရားဝင်ရောက်မှုတားဆီးကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ (မကဖ)
ကို ဖွဲ့စည်းထားရှိဖို့ စီစဉ်နေတယ်လို့ RFA က စုံစမ်းသိရပါတယ် ပြီးခဲ့တဲ့ ဇူလိုင်လ ၁၂ ရက်နေ့က ဖျက်သိမ်းခဲ့တဲ့
နယ်စပ်ဒေသလူဝင်မှုကွပ်ကဲရေးဌာနချုပ် (နစက) နေရာမှာ အစားထိုးတာဝန်ပေးအပ်ဖို့ အဲဒီမကဖအဖွဲ့ကို အမြန်ဖွဲ့
စည်းမှာဖြစ်ကြောင်း။ အရင်က နစကမှာ တပ်မတော်၊ ရဲ၊ လဝကနဲ့ အကောက်ခွန် စုပေါင်းဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပေမယ့် 
မကဖကိုတော့ လဝကအဖွဲ့ တစ်ခုတည်းကသာ တာဝန်ယူမှာဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။
မကဖ ကွပ်ကဲရေးမှူးရုံးကို လဝကဝန်ထမ်း ၁၁ ယောက်နဲ့ ဖွဲ့စည်းမှာဖြစ်ပြီး မောင်တောမြို့ပေါ်က ပီအိုအီးဂိတ်၊
သုံးမိုင်စစ်ဆေးရေးဂိတ်၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနယ်စပ်နဲ့ ထိစပ်နေတဲ့ မောင်တော မြောက်ပိုင်းဒေသကအောင်ဇူ၊ ကြိမ်ချောင်း၊
ငါးခူရ၊ ပျဉ်ဖြူနဲ့ တောင်ပြို လက်ဝဲဒေသတွေအပြင မောင်တော တောင်ပိုင်းဒေသကပင်လယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့
အလယ်သံကျော်နဲ့ အင်းဒင်နေရာတွေမှာ နေရာချထားဖို့ကိုဝန်ကြီးဌာနက စီစဉ်နေတယ်လို့ လဝကအရာရှိတစ်ဦးက
အတည်ပြုပြောကြားပါတယ်။ နိုင်ငံခြားသားများ မတရားဝင်ရောက်မှု တားဆီးကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ (မကဖ) အဖွဲ့တွေကို
အရင်ကလည်း ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာ ဖွဲ့စည်းဖူးကြောင်းသိရပါတယ်။
24.8.2013 ညနေ 7:00 ခန့်မှာ ကန့်ဘလူမြို့-တောင်ဘက် ဆယ်မိုင်ကွာမှာရှိတဲ့ ထန်းကုန်းမြို့
ငယ်လေးမှာ အဓိကရုဏ်း ဖြစ်ပွား
ထန်းကုန်းအရှေ့ဘက် ဇီးပင်လှရွာမှ ထန်းကုန်းမြို့ကို အလုပ်လာလုပ်တဲ့ ဗမာမိန်းကလေး မလပြည့်
(၁၉) နှစ်ကို ထန်းကုန်း ကုလားသုံးယောက်က အပြန်လမ်းမှာ မုဒိမ်းကျင့်
လူအုပ်ကြီးက ဖမ်းမိထားတဲ့ ကုလားကို ထုတ်ပေးဖို့ တောင်းဆိုရာမှ အဓိကရုဏ်းစတင်ဖြစ်ပွား
ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ည 8:00 နာရီခန့်မှာ ထန်းကုန်း ဘူတာရုံအရှေ့ဘက်ဈေးဆိုင်တွေကို ဖျက်နေကြပြီလို့
သိရပါတယ်။ည 9:30 ခန့်မှာ မီးစလောင်နေပြီလို့ သိရပါတယ်။ လူအုပ်က ရွာမှတက်လာပြီး ဖြိုဖျက်နေကြတာပါ။
ဖုန်းလိုင်းတွေဖြတ်တောက်ထားလို့ စုံစမ်းရခက်နေပါတယ်။ လုံခြုံရေးတွေ မတွေ့ရဘဲ လူအုပ်ကြီးပဲ တွေ့ရတယ်လို့
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ကန့်ဘလူမြို့နယ်ထန်းကုန်းကျေးရွာတွင် မြန်မာ အမျိုးသမီးငယ် တစ်ဦးအား အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် တစ်ဦးက အဓမ္မပြု ကျင့်ရန် ကြံစည်ခဲ့ကြောင်း သတင်းထွက်ပေါ်ပြီးနောက် မီးရှို့မှုများ ဖြစ်ပွား
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ကန့်ဘလူမြို့နယ်ထန်းကုန်းကျေးရွာတွင် မြန် မာအမျိုးသမီး တစ်ဦးအား အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် တစ်ဦးမှ အဓမ္မပြုကျင့်ရန်ကြိုးစားခဲ့မှုကို အဆိုပါ အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ သူများက သိရှိခဲ့ကြောင်း သတင်းထွက်ပေါ်ပြီးနောက်တွင် မီးရှို့မှုများ ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။သြဂုတ် ၂၄ ရက် ညနေ ၅း၃၀ နာရီအချိန်က ထန်းကုန်းကျေးရွာသို့ လာရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်သည့် အသက် ၁၉ နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီး ငယ်အား အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် လူငယ်တစ်ဦးမှ အဓမ္မပြုကျင့်ရန်ကြိုး စားခဲ့သည်ဆိုသော သတင်းထွက်ပေါ်အပြီးနောက်တွင် ထန်းကုန်းတိုက်နယ် အတွင်းရှိ ကျေးရွာများမှ လူ ၁၀၀၀ ခန့်က နယ်မြေခံ ရဲစခန်းသို့ ရောက် ရှိလာပြီး တရားခံအား ထုတ်ပေးရန် တောင်းဆိုခဲ့ပြီးနောက်တွင် ယခုကဲ့သို့ မီရှို့မှုများ ဖြစ်ပွားခဲ့ရခြင်း ဖြစ်သည်ဟု သိရှိရသည်။ည ၉ နာရီ ၀န်းကျင်ခန့်၌ ထန်းကုန်းကျေးရွာတွင် မီးရှို့မှုများ စတင်ဖြစ်ပွား ခဲ့ပြီး ဈေးဆိုင်ခုနစ်ဆိုင်နှင့် နေအိမ် ၁၅ လုံးခန့် မီးရှို့ခံခဲ့ရကြောင်း၊ ရဲတပ်ဖွဲ့ ၀င် ၅၀ ခန့်က အခြေအနေကို ထိန်းသိမ်းရန် ကြိုးပမ်းလျက်ရှိကြောင်း သိရှိ ရသည်။ အခင်းဖြစ်ပွားရာ နေရာသို့ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအ ဖွဲ့မှ နယ်/လုံဝန်ကြီး ရောက်ရှိကာ အခြေအနေကို ၀ိုင်းဝန်ထိန်းသိမ်း နေသည်ဟု သိရပြီး နီးစပ်ရာ မြို့နယ်များမှ မီးသတ်ယာဉ်များ ရောက်ရှိကာ မီးငြိမ်း သတ်နေကြသည်ဟု ထန်းကုန်းကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနေသည့် The Daily Eleven သတင်းထောက်မှ သတင်းပေးပို့သည်။"အုပ်စုနှစ်စု ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်တာမျိုးတော့ မတွေ့ရပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ည ၉ နာရီ ၀န်းကျင်လောက်ကတည်းက ဖြစ်နေတဲ့ မီးရှို့မှုတွေက အခုထိ ရပ်တန့် သွားခြင်း မရှိသေးပါဘူး။ အဓမ္မပြုကျင့်ဖို့ ကြိုးစားတဲ့သူက ကန့်ဘလူ ရဲစခန်းကို ရောက်သွားပြီလို့ သိရပါတယ်။ ကန့်ဘလူနယ်မှာက အစ္စလာမ် ဘာသာဝင် အများအပြား ရှိတာကြောင့် အဓိကရုဏ်းသဏ္ဍာန် ဖြစ် လာမှာကို ဒေသခံတွေအားလုံး စိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ အသေးစိတ် အခြေအနေတွေကိုတော့ မသိရသေးပါဘူး" ဟု The Daily Eleven သတင်းထောက်က သြဂုတ် ၂၄ ရက် ည ၁၂ ခန့်တွင် သတင်းပေးပို့သည်။ထပ်မံရရှိသော သတင်းများအရ မီးလောင်ကျွမ်းမှုများ ဆက်လက်ဖြစ် ပွားနေပြီး သြဂုတ် ၂၅ နံနက် ၁ နာရီကျော်အထိ မီးငြိမ်းသတ်နေရ ဆဲ ဖြစ်ကြောင်းနှင့် သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများက အခြေအနေကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ရန် လုပ်ဆောင်လျက်ရှိကြောင်း ကနဦး သတင်းများအရ သိရသည်။
ဧည့်နိုင်ငံသား၊ နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ရသူ နိုင်ငံသားဆိုပြီးတော့ တန်းတူအခွင့်အရေးရ
ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဦးသိန်းစိန် ခင်ဗျာာားးး
ဧည့်နိုင်ငံသား မဲပေးလို့ရတယ်ဆိုတာ ဘယ်နိုင်ငံမှာမှ ကျနော် မကြားမိပါဘူး ။ အမေရိကန်မှာလည်း မရှိပါဘူး ။ အင်္ဂလန် ပြင်သစ် ဂျာမနီမှာလည်း မကြားမိပါဘူး ။ စင်ကာပူမှာလည်း PR တောင် မဲပေးလို့ မရပါဘူး ။ အမေရိကန်မှာလည်း Green Card နဲ့ဆိုရင်တောင် မဲပေးလို့ မရပါဘူး ။ ပါတီဝင်လို့လည်း မရပါဘူး ။
ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတို့ ဆရာတပည့်တစ်ဖွဲ့လုံးက ညံ့လွန်းအားကြီးပါတယ် ခင်ဗျာာားးး
ဧည့်နိုင်ငံသား မဆိုနဲ့ အမြဲနေထိုင်ခွင့်ရသူများတောင် ဒီမိုကရေစီ ဘိုးအေနိုင်ငံကြီးများမှာ ပါတီထောင်ခွင့် မရပါဘူး ခင်ဗျာာာားးး
" ဒို့တာဝန် အရေးသုံးပါးကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်တဲ့သူ ဖြစ်ရမယ်။ နောက်တစ်ခါ ပုဒ်မ ၄၀၄(ခ) မှာ နိုင်ငံတော်၏ ကျေးဇူးသစ္စာကို စောင့်သိရိုသေတဲ့သူ ဖြစ်ရမယ်။ အဲဒီလိုဖြစ်တဲ့ သူတွေဟာ ဒီမှာ ဧည့်နိုင်ငံသား၊ နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ရသူ နိုင်ငံသားဆိုပြီးတော့ ကျယ်ပြန့်စွာ ဖော်ပြထားတာ ဖြစ်တဲ့ အတွက်ကြောင့် တန်းတူအခွင့်အရေးရတယ် " ဆိုတာကလည်း အခု ဖွတ်ပြောမှ သိတာပါ ။
ညောင်နှစ်ပင်က ကြိုးကိုင်သူများအဖွဲ့က သိပ်တော်တာပဲနော် ၊ သူတို့ ရေးဆွဲခဲ့တဲ့ အခြေခံဥပဒေတို့ ၊ နိုင်ငံရေးပါတီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ဥပဒေ နှင့် အခြားဥပဒေတွေ အကုန်လုံး ရှယ်ပဲ ၊ ပြင်စရာမရှိလောက်အောင် ကောင်းတာ ... ဟားဟားးး
နိုင်ငံရေး ပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဥပဒေပါ နိုင်ငံသား သတ်မှတ်ချက်ကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေကြမ်းအား အမျိုးသားလွှတ်တော်တွင် တင်သွင်းမှုအား အာဏာရ ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီမှ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်မှ ကန့်ကွက်ခဲ့သဖြင့် အမျိုးသား လွှတ်တော်မှ မဲခွဲဆုံးဖြတ်ရန် ရွှေ့ဆိုင်းခဲ့သည်။
သြဂုတ် ၂၃ ရက်က ပြုလုပ်သော အမျိုးသား လွှတ်တော်တွင် ရခိုင်ပြည်နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁) မှ ဒေါက်တာအေးမောင်က ယင်းဥပဒေကြမ်းအား လွှတ်တော်၌ လက်ခံဆွေးနွေးရန် တင်သွင်း ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဥပဒေပုဒ်မ ၄ ပုဒ်မခွဲ (က)တွင် ပါရှိသော "နိုင်ငံသား၊ ဧည့်နိုင်ငံ သား၊ နိုင်ငံသားပြုခွင့်ရသူ သို့မဟုတ် ယာယီသက်သေခံလက်မှတ် ကိုင်ဆောင်ထားသူ ဖြစ်ခြင်း" ဆိုသည့် စကားရပ်အစား "နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း" ဟု ပြင်ဆင်သင့်ကြောင်း လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာအေးမောင်က တင်သွင်းခြင်း ဖြစ်သည်။
ထို့အပြင် ပုဒ်မ ၅ ပုဒ်မခွဲ (ဃ)တွင် ပါရှိသော "ပုဒ်မ ၄ ပါ အချက်များနှင့် ညီညွတ်သော ပါတီ ထူထောင် လိုသူများ၏ အမည်၊ အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင်၊ နေရပ် လိပ်စာ၊ မွေးနေ့ သက္ကရာဇ်နှင့် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး ကတ်ပြားအမှတ်၊ အမျိုးသား မှတ်ပုံတင်အမှတ်၊ ဧည့်နိုင်ငံသား လက်မှတ်အမှတ်၊ နိုင်ငံသားပြုခွင့်လက်မှတ် သို့မဟုတ် ယာယီသက်သေခံ လက်မှတ်အမှတ်" ဆိုသည့် စကားရပ်အစား "ပုဒ်မ ၄ ပါ အချက် များနှင့် ညီညွှတ်သော ပါတီတည်ထောင်လိုသူများ၏ အမည်၊ အဘအမည်၊ အလုပ် အကိုင်၊ နေရပ်လိပ်စာ၊ မွေးနေ့သက္ကရာဇ်နှင့် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး ကတ်ပြားအမှတ်" ဟု ပြင်ဆင်သင့်ကြောင်းနှင့် ပုဒ်မ ၁၀ ပုဒ်မ ခွဲ (က)တွင် ပါရှိသော "နိုင်ငံသား၊ ဧည့်နိုင်ငံသား၊ နိုင်ငံသားပြုခွင့်ရသူ သို့မဟုတ် ယာယီသက်သေခံလက်မှတ် ကိုင်ဆောင်ထား သူ ဖြစ်ခြင်း" ဆိုသည့် စကားရပ်အစား "နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း" ဟု ပြင်ဆင်သင့်ကြောင်း တင်သွင်း ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။
"ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာ မဲပေးနိုင်တဲ့သူတွေနဲ့ အရွေးခံနိုင်သူများဟာ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၆၉ (က)အရ နိုင်ငံသားများသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၄၅(က)၊ ၁၉၈၂ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံသား ဥပဒေပုဒ်မ ၂(ခ)၊ ပုဒ်မ ၃၊ ပုဒ်မ ၅ တို့တွင် မည်သူတို့သည် နိုင်ငံ သားဖြစ်ကြောင်းကို ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။ နိုင်ငံရေးပါတီများ ထူထောင်ခြင်းဟာ နိုင်ငံသားများနဲ့သာ သက်ဆိုင်တာကြောင့် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ဖြစ်စေ၊ အခြားတည်ဆဲ ဥပဒေများနဲ့ဖြစ်စေ ညီညွတ်စေရန် ပြင်ဆင်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်" ဟု ဒေါက်တာအေးမောင်က ပြောကြားသည်။
Ref - EMG
Darwin ရဲ့ သီအိုရီအရ Survival is for the Fittest ပဲ ခင်ဗျ ။
ဒို့တာဝန် အရေးသုံးပါးကို ဦးထိပ်ထားပါ ။ နိုင်ငံတော်အလံကို အလေးပြုပါ ။ ခေါင်းအုံးအောက် ထားအိပ်ပါ ။ ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေကို အသက်နဲ့လဲပြီး ကာကွယ်မယ်လို့ ကတိပြုပါ ။ ကြံဖွတ် ပါတီထဲကို ၀င်ပါ ။ ကြံဖွတ်ကိုပဲ မဲပေးပါ ။ နိုင်ငံတော်ဖွတ်ရဲ့ သစ္စာကို စောင့် သိပါ ။ မြန်မာစာနဲ့ စကားကို သင်ယူပါ ။ နိုင်ငံတော် သီချင်းကို အာဂုံဆောင်ပါ ။
အဲဒါဆို အခြေခံဥပဒေအရ ဧည့်နိုင်ငံသား ၊ နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ရှိသူ ဖြစ်ပြီ ။
နောက်ပြီး ဖွတ် သတင်းပေးလုပ်ပါ ။ ဖွတ် ခိုင်းတာ လုပ်ပါ ။ ဖွတ် တောင်းရင် ပေးပါ ။ ဒါဆို ခင်ဗျားတို့ကို ဖွတ်က ကာကွယ်လိမ့်မယ် ။ ဆောင်မလိမ့်မယ် ။
ဒီညနေ ရုံးကပြန်လာတော့ နေတဲ့ရပ်ကွက်ထဲ ၀င်ဝင်ချင်း တစ်လမ်းလုံး ဆွဲထားတဲ့ ဆိုင်းပုဒ်တွေပါ။ လမ်းသွယ်ထိပ်တိုင်းမှာ ဆွဲထားတယ်။ ဒီလောက်မိုးရွာ ရေကြီးနေတာတောင် ခဲရာခဲဆစ် အဲဒါတွေ လိုက်ချိတ်ထားတယ်။ အလံတွေကလည်း လမ်းတိုင်းလူလို့...... နိုင်ငံတော် ဘာသာနေ့တဲ့ ဘယ်သူက ထူးပြန်သလဲ ( Aung Shin )
"ခရီးသွား ခုနစ်သောင်းခန့် နေ့စဉ် ဖြတ်ကူး သွားလာနေသည့် ရန်ကုန်မြစ်ကို ဖြတ်သန်း၍ ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီး ဆိပ်ကမ်းမြို့နယ် ဘုန်းကြီးလမ်း အမှတ်(၂) ဆိပ်ခံ တံတားမှ ဒလမြို့နယ် ကမာကဆစ် ရပ်ကွက် ဗိုလ်မင်းရောင်လမ်းသို့ မြစ်ကူးတံတား တစ်စင်း ဆောက်လုပ်ရန် တောင် ကိုရီးယား နည်းပညာကုမ္ပဏီ များက အကြိုအင်ဂျင်နီယာ လုပ်ငန်းများစတင်လုပ်ဆောင်နေပြီ
ဖြစ်ကြောင်း ဆောက်လုပ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန တံတား အထူးအဖွဲ့ (၁)မှ ဒုတိယ အင်ဂျင်နီယာမှူးကြီး ဦးဝင်းဇော်က The Voice သို့ပြောကြားသည်"
ရန်ကုန်မြစ်ကိုဖြတ်၍ ရန်ကုန်-ဒလ ဆက်သွယ်သည့်တံတား တည်ဆောက်မည့်နေရာ မှာ ရွှေတိဂုံ ဘုရားလမ်းအနီး ဖြစ်လာနိုင်သည်ဟု ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်မှ အတွင်းရေးမှူး ဦးကျော်စိုး က နိုဝင်ဘာလ ၅ ရက်နေ့က ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ကိုရီးယား သမ္မတနိုင်ငံ ဒုတိယ ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် နည်းဗျူဟာနှင့် ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး H.E. Mr. Hyun Oh-Seok နှင့် ဆောက်လုပ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယ ဝန်ကြီး ဒေါက်တာ ဝင်းမြင့် တို့သည် ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်း ယာယီ ရှင်းလင်းဆောင်၌ ယမန်နေ့ ညနေ ၄ နာရီက ရန်ကုန်မြစ်ဖြတ် ရန်ကုန်-ဒလ တံတား တည်ဆောက်ရေး စီမံကိန်း နှင့်ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးကြပြီး ဒလမြို့ ကမာကဆစ် ရပ်ကွက် ဗိုလ်မင်းရောင်လမ်း ဆိပ်ကမ်းရှိ ကူးတို့ဆိပ်သို့ သွားရောက် ကြည့်ရှု ခဲ့ကြကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
နေပြည်တော် ဇွန် ၂၁ - မြ၀တီ
အိမ်ပေါင်း ၃၀ ကျော်မီးလောင်